Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya Jamaica wutere nke ukwuu maka ihe mberede Trelawny
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya Jamaica wutere nke ukwuu maka ihe mberede Trelawny
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Minista njem nlegharị anya Jamaica Hon. Edmund Bartlett ekwupụtala mwute maka ihe mberede mere ụnyaahụ na Trelawny, nke gburu otu onye ma merụọ ọtụtụ ndị ọzọ ahụ.
Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Jamaịka kesara ezinaụlọ na ndị enyi nke onye ahụ nwụrụ anwụ n'ihe mberede ụgbọ ala mere.
Ọ chọkwara ka mgbake ngwa ngwa nye ndị njem nlegharị anya niile lanarịrị ihe mberede a.
A kpọgara ndị njem nlegharị anya ise na ụlọ ọgwụ Falmouth ka ha nweta ọgwụgwọ, agbanyeghị, onye ọkwọ ụgbọ ala njem ahụ merụrụ ahụ ya.
“O wutere m nke ukwuu ịnụ maka ihe mberede a ma kwara ụta maka ọnwụ nke ndụ na ọtụtụ mmerụ ahụ. Nke a bụ ihe nwute na, n'aha nke Ozi nke Njegharị na ndị otu ọha ya, ana m akasi ezinaụlọ ha na ndị enyi nke onye ahụ nwụrụ anwụ na mgbake ngwa ngwa nye ndị merụrụ ahụ,” Minista Bartlett kwuru.
Ụnyahụ, ụgbọ ala na-ebu ndị ọbịa n'otu ụlọ oriri na ọṅụṅụ da ụgbọ ala ọzọ na Duncans Main Road na Trelawny. A kpọgara United States ise na ụmụ amaala Cuba abụọ n'ụlọ ọgwụ Falmouth maka ọgwụgwọ. Onye ọkwọ ụgbọ ala nke ọzọ ahụ merụrụ ahụ.
The Jamaica Njem Nleta ebidola usoro ndị dị mkpa ma soro ndị ikwu na ndị ọchịchị dị mkpa na-akpakọrịta.